Concrete Vibrator, Concrete Trowel Machines, Concrete Cutter - ACE MACHINERY
rindrina fananganana isika
Novainay ho tetikasa mpandresy ny loka.
Masinina Ningbo ACE ho toy ny mpamatsy vahaolana amin'ny fananganana milina misy traikefa mandritra ny 25 taona .amin'ny vokatra lehibe: vibrator vita amin'ny simenitra, tsanganana poker, plate compactor, tady rammer, trowel Power, mixeur Concrete, Cutter vita amin'ny beton, cutter vy, vy bender ary excavator kely . Manana varotra iraisam-pirenena 6 tsara izahay, injeniera 2 manana traikefa 15 taona, mpamorona 4, 3 QC ary 1 QA, hanaovana ekipa voaporofo, ireo teknisianina za-draharaha dia mifehy tsara ireo lafin-javatra lehibe tafiditra amin'ny fizotry ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra. Hijery misimisy kokoa
330kg miaraka amina compacteur lovia 38.0kn
270kg miaraka amina compacteur takelaka 36.0kn
160kg miaraka amina compacteur takelaka 30.5kn
125kg miaraka amin'ny compactor plate 25.0kn
80kgs miaraka amin'ny 15.0kn Plact Compact misy tanky rano
120kgs Concrete Vibrating Diesel Plact Compactor
90kgs miaraka amin'ny vidin'ny Compact Compact 15.0kn
77kgs miaraka amin'ny 13.5kn Honda Plate Compactor
65kgs miaraka amin'ny 10.5kn vibrant Plate Compactor
Masinina manamarika arabe rehetra
Ny milina ACE dia nifantoka tamin'ny fampiroboroboana ny roller mihodina hydraulic avo lenta. Taorian'ny fampandrosoana nandritra ny am-polony taona maro, Ankehitriny manana Single-drum; Double-drum sy Ride amin'ny Vibration roller.
** Rafitra Poclain na American White Hydraulika ary paompy Hydraulika
ACE Vibration roller dia natao ho an'ny be mpampiasa amin'ny karazana fanamboarana fotodrafitrasa sy fikojakojana, fitaovana fanamboarana ilaina amin'ny fikojakojana ny lalana, ny fanamboarana ny faritra, ny faritra kely ary ny fitehirizana ny haavo.
ACE Mini Excavator dia natao miaraka amin'ny habe kely sy kanto ary mihodinkodina. Modely fivarotana an-tampony: 1.0T-1.2T-1.6T sy 2.0T. Izy io dia miasa amin'ny kojakoja samihafa, toy ny: Bucket, Auger, Rake, Ripper, Wood Grab, Broken Hammer ... sns. mety indrindra amin'ny asa kely, amin'ny zaridaina, tanimboly, tanimboly, trano fambolena legioma, fametrahana fantsom-pandraisana, asa vaventy ary fananganana tanàna.
Mivezivezy amin'ny motera YAMAR, misy tabataba ambany sy fahombiazana ara-toekarena tena tsara, môtô fitsangatsanganana ao Japan Eton ary mampifandray afovoany, mampiditra fantsom-pifandraisana.
ACE Self Loading Concrete Mixer dia karazana milina maro karazana izay manambatra ny mixer transit, mixer beton ary wheel loader miaraka.
Ny maodelin'ny varotra ambony: 1.6m3-2.2m3-4.0m3 sy 4.2m3
Afaka mameno, mandrefy, mifangaro ary mamoaka fangaro mivaingana izy io. Miaraka amin'ny motera YUNNEI 60kw ~ 92kw Diesel matanjaka sy ny kodiarana 4, ny mixer vita amin'ny beton dia mampitovy azy amin'ny kamio ary afaka alefa any amin'ny toerana tokony alehany ilay mpandraharaha. Tena mety amin'ny famoahana fitaovana, toy ny simenitra, agregate, vato.
Hitachi ZX690LCR-7 & Masinina Mavesatra ...
30 Oktobra, 20
Izany miaraka amin'ny fampivoarana ny excavator sy ny milina fananganana, dia mihamaro ny vokatra izay mifanaraka amin'ny toe-javatra samy hafa efa natao, ary eto ny vaovao farany momba ny ma ...
R940 Crawler Excavator Avy any Libherr
France R&D sy ny foibe famokarana vao nahavita milina vaovao -R940 Crawler Excavator izay vokatra farany indrindra ho an'ny andiany R 944C Tombontsoa amin'ny traikefa manan-karena avy any Libherr, ny ne ...
Miaraka amin'ny kalitaon'ny vokatra ho laharam-pahamehana voalohany, dia hamorona marika iray izay mamaritra ny indostria indray izahay.
Ny milina ACE dia manambatra matanjaka ny hery sy ny fahadiovana hitondra anao ny tsara indrindra amin'ny milina beton sy compaction.